Unyulo lwaseYurophu luya kuchaphazela ukuthengiswa kwemasheya | Ezezimali
Unyulo lwePalamente yaseYurophu lwango-2019 lucwangciselwe ukubakho kuwo onke amazwe e-European Union ngeCawa, nge-26 kaMeyi 2019. Unyulo lokugqibela lwase-2014 luka-XNUMX lwalulolona lukhulu unyulo lwamazwe ngamazwe ezingazange zabanjwa ngaxeshanye. Kodwa ngeli xesha kuninzi okusemngciphekweni kwaye ngokungathandabuzekiyo kuya kuba nefuthe kwiimarike zezabelo. Kulungile ngenye indlela okanye enye, kuxhomekeke kwiziphumo eziphuma kwiipolitiki zaseYurophu.
Unyulo lwaseYurophu ngoMeyi 2019 luya kuba nefuthe ngqo kubomi babemi baseYurophu. Bazakuthatha isigqibo ngendlela iYurophu ezakwenza ngayo kule minyaka izayo ngokunxulumene nezinye zeenkxalabo zabantu baseYurophu, malunga nengqesho, ishishini, ukhuseleko, ukufuduka kunye notshintsho lwemozulu. Kusenokwenzeka ukuba kwifayile ye- ubudlelwane botyalo-mali kwaye ngokubanzi kwihlabathi elihlala linzima lemali. Apho ii-indices zesitokhwe ziya kuthi ziqwalasele kakhulu into enokwenzeka ngeziphumo kunyulo lwaseYurophu.
Ukwabiwa kwezihlalo kuchaziwe kwiZivumelwano zaseYurophu. Into emiselweyo kulwabiwo ngabemi belizwe ngalinye, nangona amazwe anabantu abambalwa enezihlalo ezininzi ngokunxulumene noko kulungelelaniswe ngokungqongqo. Okwangoku inani lamasekela lisusela kwisithandathu ukusuka eMalta, eLuxembourg naseCyprus ukuya kumashumi alithoba anesithandathu ukusuka eJamani. Ngelixa kwelinye icala, iSpain ikwelona nqanaba liphezulu kulwabiwo lwezihlalo zepalamente yelizwekazi kwaye inakho dlala indima ebaluleke kakhulu ukumisela umgaqo-nkqubo woluntu.
1 Ukubukela kwiMarket
2 Uninzi lweemeko ezimbi
3 Iimpawu ezibuthathaka ngakumbi kwiziphumo
4 Iiasethi ezizinzileyo
5 Kusondele kakhulu ehlotyeni
6 Unyulo lwaseYurophu: inkqubo yonyulo
Ngosuku olulandelayo emva konyulo lwase-Europe ngoMeyi, iimarike zezabelo kwilizwekazi elidala ziya kunika isigwebo, kuxhomekeke kwiziphumo. Naluphi na uhlolo olugqitha kwi ukwakhiwa kwePalamente ngoku IYurophu iya kwamkelwa ngokufudumeleyo ziingxowa. Ukuqikelela ngokunyuka kwamaxabiso kwaye apho amaxabiso ezinto zebhanki aya kuba ngawona anokuzuza kakhulu kule meko. Olu nyuso lunokuphinda lwenziwe ngokusesikweni ngokuqina okunamandla, kokubini ngexesha labo kunye nasekuhambeni ngokuthe nkqo abanokuthi babe neenkwenkwezi ukusukela ngala mhla.
Enye into eyahluke kakhulu yile Imikhosi yokulwa iYurophu okanye kwinkundla yamapolisa, bakwazile ukugqitha kulindelo lwabo lonyulo kwaye banokuba nolawulo kwikhamera. Alithandabuzeki elokuba ukuba le meko iyenzeka, ilahleko iya kwenziwa ngokubanzi kwiimarike ze-equity kunye nokuqina okungaqhelekanga. Ngawo onke amacandelo emarike yemasheya achaphazelekayo kwaye kungekho ndawo ikhuselekileyo enokutsala imali yabatyali mali. Into enokuba neziphumo ezibi kakhulu kwiimarike zesitokhwe, kokubini kwixesha elifutshane neliphakathi. Ngaphandle kwezinye izinto zobugcisa.
Uninzi lweemeko ezimbi
Ukuba ekugqibeleni le meko yenzekile, alithandabuzeki elokuba elona nyathelo lilumkileyo elinokuthathwa ngabatyali zimali abancinci nabaphakathi rhoxisa izikhundla zabo kwiimarike zezabelo. Ubuncinci kangangexesha elingaphezulu okanye elincinci kwisithuba sendawo kuba ilahleko abanokuyifumana zinokubhengezwa kakhulu. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba kungade kubekho notshintsho kumkhombandlela kwiindices eziphambili zaseYurophu.
Ngelixa kwelinye icala, ayinakulityalwa ukuba kunyulo lwaseYurophu indlela lawula esi sithuba sikhethekileyo soqoqosho nezemali. Nasiphi na isiphumo esinciphisa imisebenzi yale misebenzi siyakuthathwa kakubi ziimarike zezemali. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba kungabikho ukuncipha okukhulu kuqingqo lwamaxabiso esitokhwe esitokhwe. Lo ngumcimbi obaluleke kakhulu oya kuthi ekugqibeleni uchaphazele utyalo-mali lwakho kwaye ngenxa yesi sizathu kuyacetyiswa ukuba uphonononge ipotifoliyo yakho nje ukuba zaziwe iziphumo zonyulo lwaseYurophu ngoMeyi 2019.
Iimpawu ezibuthathaka ngakumbi kwiziphumo
Alithandabuzeki elokuba kuya kubakho ezinye iinkampani ezidwelisiweyo eziza kuthi zithambekele ngakumbi ekuphuculeni ukwanda okanye ukuncipha kokuqina okukhulu kunezinye. Ngale ndlela, ii-cyclical stocks ziya kuba zezona zinomdla kwezi ntshukumo kwiimarike zezabelo. Ayothusi into yokuba nakwiimeko eziqhelekileyo bazisa i- ukungazinzi okuphezulu numahluko phakathi kwamaxabiso aphezulu kunye neyona isezantsi afanelekileyo. Apho, ngokuxhomekeke kwiziphumo, ungathatha enye okanye enye indlela. Kodwa nangayiphi na imeko, ngamandla amakhulu kunamanye amacandelo emarike yemasheya.
Kwelinye icala, elinye lamacandelo eshishini ekuya kufuneka kuhlawulwe kuwo ingqalelo ekhethekileyo yile yezemali apho zonke iibhanki zidwelisiwe. Kuyabonakala kwezi veki ukuba yenye yezona zinamandla kakhulu kwiimarike zezemali. Ngokuxabisa okanye ukwehla phantse yonke imihla malunga ne-2% okanye i-3%. Ezi ntshukumo zinokuphindwa okanye zomelezwe emva konyulo lwaseYurophu ngoMeyi 2019. Ukuba sisindululo esinobungozi ukuba uvula izikhundla kwezi ntsuku. Kuya kuba bhetele kakhulu ukuba ujonge into enokwenzeka kwiintsuku ezimbalwa ezizayo.
Ngelixa ngokuchaseneyo, kukwakho noluhlu lwamaxabiso oluya kukunika uxolo olukhulu lwengqondo ukujongana nale nkqubo yonyulo. Kungenzeka njani ukuba kungenjalo, imelwe ngamaxabiso ecandelo lombane onamandla. Ayothusi into yokuba kwezinye iimeko bathanda ukwenza njenge amaxabiso okusabela xa ujongene nemeko yokungazinzi kwiimarike zezabelo. Ewe kunjalo, kunyulo oluzayo lwaseYurophu banokuphinda le ndima bayidlalileyo kakuhle kule minyaka idlulileyo.
Ngapha koko, asinakulibala ukuba ezi nkampani zidwelisiweyo bahambisa izabelo ngengeniso yonyaka ephakathi kwe-5% kunye ne-7%. Ngamanye amagama, baya kukunika ithuba lokwakha ipotifoliyo yengeniso esisigxina ngaphakathi kokungafaniyo kwaye oku nokuba kwenzeka ntoni kwiimarike eziguqukayo zengeniso. Uya kuba nemali ethe xhaxhe kwiakhawunti yakho yokutshekisha, nokuba amaxabiso ezabelo zakho ehla ngezi ntsuku zikhethekileyo. Isenokuba lixesha elifanelekileyo lokuba uvule izikhundla kweli candelo kwaye ngaphandle kokunyuka okwandileyo okukhoyo okokoko kwehlobo lonyaka ophelileyo. Ngokuhlaziywa kufutshane ne-30% kwezinye iimeko, ezinje nge-Endesa.
Kusondele kakhulu ehlotyeni
Enye yezinto ezisebenza ngokuchasene nonyulo lwaseYurophu ngoMeyi 2019 kukuba basondele kakhulu ehlotyeni. Oko kukuthi, ixesha apho umthamo wekhontrakthi uwe kakhulu kwaye ke ulungele ngakumbi kuphuhliso lokuwa okunzulu kwimigangatho yorhwebo. Njengoko kuye kwenzeka kwiminyaka edlulileyo kwaye babone njengenxalenye elungileyo yabatyali mali abancinci nabaphakathi babuya nemali encinci kwipotifoliyo yezokhuseleko. xa ubuya kwikhefu lakho. Le yimeko ekufuneka uyiphephe konke konke kwaye kufuneka uvale izikhundla ukuze ukufezekise, kufuneka kwenziwe ngaphandle kwazo naziphi na iingxaki.
Kufuneka kukhankanywe ukuba sikwixesha apho iimarike zezemali zinokuhla emva kohlaziyo lwamva nje. Kukhethwa ke ngoko, ukuba kungavulelwa sikhundla kwizabelo zotshintshiselwano ngeempahla kwinto enokwenzeka emva konyulo lwaseYurophu ngoMeyi. Kuba akukho mathandabuzo ukuba kuninzi ongaphulukana nako kunenzuzo kuba isenokuba sisizathu esifanelekileyo sokulungiswa kwamaxabiso esitokhwe. Ngamafutshane, ngumzuzu obuthathaka kakhulu apho ungayi kuba nanyanzelo ngaphandle kokwenza imozulu yesaqhwithi esinokubakho ukusukela ngala mhla. Lilonke, ziinyanga ezimbalwa apho uphume khona kwiimarike zezemali kwaye lelo lixesha elidlula ngokukhawuleza. Ungalibali ukusukela ngoku.
Unyulo lwaseYurophu: inkqubo yonyulo
Imigaqo yokunyulwa kwamasekela ifuna nakweyiphi na imeko uhlobo oluthile lokumelwa ngokulinganayo. Inkqubo iqinisekisa ukuba iqela liphumelele, umzekelo, Iipesenti ezingama-20 zeevoti, bafumane malunga neepesenti ezingama-20 zezihlalo ezikhuphisanayo, ukuze amaqela amakhulu namancinci abe nethuba lokuthumela abameli babo kwiPalamente yaseYurophu. Ilizwe ngalinye likhululekile ukuseta ezinye izinto ezininzi ezibalulekileyo kwinkqubo yonyulo. Umzekelo, amanye amazwe ahlulahlulahlula ilizwe lawo libe zizithili zonyulo ngelixa ezinye zinesithili esinye sonyulo.
Amaqela esizwe athabatha inxaxheba kunyulo, kodwa akunyulwa amasekela, uninzi lukhetha ukuba yinxalenye yalo amaqela ezopolitiko ezizwe ngezizwe. Uninzi lwamaqela esizwe adibene neqela lezopolitiko laseYurophu, ke omnye wemibuzo ephambili ngobusuku bonyulo kukwazi ukuba leliphi kula maqela aseYurophu eliza kuba nefuthe elikhulu kwindlu yowiso-mthetho elandelayo. Kwaye apho iimarike zezabelo ziya kwazi kakuhle, ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba kungangunobangela wokuba bavuke okanye bawe kwiintsuku ezisemva konyulo lwaseYurophu kulo nyaka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Unyulo lwaseYurophu luya kuchaphazela ukuthengisa